5 सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस बजार मा जर्मनी | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस बजार मा जर्मनी
तपाईं फेरि वर्ष को समय लगभग यसलाई विश्वास गर्न सक्छौं? यो वर्ष सबैभन्दा सुन्दर समय हो! साँच्चै जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार संग आत्मा मा प्राप्त! क्रिसमस हव्वाले सम्म लेट नोभेम्बर, सबै जर्मनी माथि शहर वर्गहरूको क्रिसमस बजार संग गूंज छन्. Deutschland सबैभन्दा treasured परम्परा को रूपमा (जर्मन जर्मनी), ठूलो शहर र साना सहर उस्तै आगमन सिजन मनाउन. त्यसैले gluhwein एक हट मग लो र यी सक्दैन मिस छुट्टी हट स्पट मा खुला आगो बरस रही हेर्ने गोलियां गर्न तयार.
1. फ्रैंकफर्ट Romerberg अनि सेन्ट. Pauls वर्ग क्रिसमस बजार
यो जर्मनी सपना मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार बनेको छन् के छ. शहर पुरानो टाउन भित्र फ्रैंकफर्ट को bustle उम्कन, जो DREAMLAND क्रिसमस मौसममा एक क्रिसमस मा उत्तेजित गर्दछ. Romerberg र सेन्ट. पौलुस वर्ग सुरम्य आधा timbered घरहरू अप गरेको छ. तिनीहरूले रोशनी ढाकिएको काठ छाप्राहरू भरिएका छन्, गहने, र माला. लोकप्रिय सम्झना गर्न निश्चित गर्न को Bells को pealing, पुरानो टाउन को चर्च Bells एक आश्चर्यजनक कन्सर्ट अनुभवको लागि जिल्ला भर अनुरूप बाहिर घण्टी जसमा एक क्रिसमस हव्वाले परम्परा.
फ्रैंकफर्ट भन्दा एक सानो सम्बन्ध, तर बस जादुई रूपमा! यो बेल्जियम सीमाना साथ पहाड भित्र Nestled एउटा सानो गाउँ हो. Monschau साँच्चै जीवित जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार संग क्रिसमस समयमा आउँछ.
शहर क्रिसमस सजावट को स्थानीय राउन्ड क्रिसमस को घर एक वर्ष सम्म खुलेको भनेर लोकप्रिय हुन सिद्ध गरेका छन्. त्यसैले, तपाईं छैन भने जस्तै क्रिसमस, त्यसपछि यो बाँच्न ठाउँ छैन निश्चित छ! एक दिन यात्रा देखि कोलोन वा डसेलडोर्फ, जाने घडी शहर उजाला मा गोधूलि गर्दा nibbling मा आफ्नो क्षेत्रीय Monschauer Dutchen spongecake र sipping mulled रक्सी पहिले तपाईं फिर्ता टाउको गर्न शहर. यसको cobblestone सडकमा संग, हिउँ topped आधा काठ घर, र धारा घुमावदार यो सुखद छोटो केही छ.
3. Rothenburg ओब der Tauber Reiterlesmarkt
यो निश्चित युरोप सबैभन्दा धेरै छ सुन्दर मध्ययुगीन सहर. यो यति सुरम्य यसलाई थप एउटा चलचित्र सेट जस्तो देखिन्छ छ. यो क्रिसमस समयमा विशेष गरी साँचो छ र जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार केही सेवा प्रदायक द्वारा प्रकाश पारिएको छ.
गेट र रक्षा टावर को छाँयामा एक परी कथा को आभा conveys. तपाईं पुरानो ढोकाहरू को एक माध्यम प्रविष्ट रूपमा, तपाईं हुनेछ, तुरुन्तै सुरक्षित महसुस समय भित्र सम्मान पर्खाल को यो रोमान्टिक ठाउँ. Rothenburg enchantment पछिल्लो भन्दा प्रबल छ 1,000 वर्ष र जारी छ अन्तरराष्ट्रिय आगंतुकों मा यसको हिज्जे कास्ट गर्न.
15 औं शताब्दीमा देखि, एउटा अचम्मको क्रिसमस बजार सधैं उत्सव क्रिसमस सिजन को सुविधा छ. यो बजार मा फिर्ता हेर्न सक्छन्, एक 500 वर्ष परम्परा, र यो समय देखि यो बुद्धिमानीपूर्वक यसको ऐतिहासिक मूल देखि धेरै सानो परिवर्तन भएको छ. धेरै सांस्कृतिक घटनाहरू यो बजार संयोजनमा आयोजित छन्. बजार को हाइलाइट, तथापि, छ को उपस्थिति Rothenburg राइडर्स, जो पनि यस बजार यसको नाम दिए. ऐतिहासिक मूल riders हामीलाई आउँछ देखि मधुरो र टाढा विगतमा. हाम्रा पुर्खाहरूले तिनीहरूले अर्को दुनिया देखि दूत थिए विश्वास, जो wintertime मा मरेको को प्राण संग आकास मार्फत floated. तर यो mythical वर्ण को छवि सदियों भन्दा परिवर्तन भएको छ. डर प्रयोग यस eerie आंकडा अघि डरले एक जबकि, आज, युवा र पुराना आफ्ना फिर्ती गर्न तत्पर. जंगली horseman एउटा अनुकूल दूत भएको छ.
Rothenburg ओब der Tauber गाडिहरु गर्न बर्लिन
Rothenburg ओब der Tauber गाडिहरु गर्न श्टुटगार्ट
Rothenburg ओब der Tauber गाडिहरु गर्न म्यूनिख
Rothenburg ओब der Tauber गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
4. म्यूनिख Marienplatz क्रिसमस बजार
म्यूनिख क्रिसमस बजार को राजा र जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार को एक. यो Christkindlmarkt Marienplatz पाउन सकिन्छ, म्यूनिख मुख्य वर्ग, रमणीय stalls नजिकैको बाहिर spilling संग किनमेल सडकमा साथै.
किनभने म्यूनिख पुरानो टाउन यसको केन्द्रिय स्थान को, यो टाढा सबैभन्दा touristy र भीड बजार हो, तर यो लोकप्रिय छ एक कारण लागि: परम्परागत हस्तनिर्मित शिल्प को गोठ पछि गोठ, रमणीय नाश्ता गर्न किनेको र यो सबै पनि रोमान्टिक पृष्ठभूमि को Neues Rathaus. थप stalls र Christkindl हुलाक कार्यालय हेर्न Rathaus चोकमा मा धुनमा निश्चित हुनुहोस्, तपाईं आफ्नो पोस्टकार्ड / अक्षरहरू लागि विशेष Christkindl टिकट प्राप्त गर्न सक्छन्.
PS: अतिरिक्त जादुई दृश्य प्राप्त गर्न, पक्का हुन, माथि चढ्नु गर्न सेन्ट जर्जिया चर्च टावर सूर्यास्त पछि पनि!
5. को नूर्नबर्ग Christkindlesmarkt
को नूर्नबर्ग Christkindlesmarkt, वा नूर्नबर्ग क्रिसमस बजार, arguably Germanys सबैभन्दा प्रसिद्ध क्रिसमस बजार. क्रिसमस बजार मा Nurembergs मुख्य बजार वर्ग फिर्ता खोज मा पायाइयो सकिन्छ कागजातहरू पहिलो उल्लेख, यो वर्ष मा 1628, तर Nurembergers यो पनि थप फिर्ता तिथिहरु विश्वास.
परम्परा राखन आवश्यक छ, र आफ्नो माल बिक्री stalls को बहुमत सबै regionally छन् कुराहरू बेच. पनि काठ stalls आफूलाई regionally sourced स्प्रूस को छन्!
तपाईं पाउनुहुनेछ 180 तिनीहरूले शहर सीमा भित्र उत्पादन र ठीक वजन भने मात्र जस्तै नाम सकिन्छ कि मूल Nuremberger गर्न Christmastime मा Nurembergers घरहरू सजाउनु भन्ने काठ छाप्राहरू परम्परागत Prune पुरुष सबै कुरा बेच 23 ग्राम.
जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार गएर क्रिसमस को जादू महसुस गर्न तयार? त्यसपछि जानुहोस् एक ट्रेन सेव र मिनेटमा एउटा टिकट बुक!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस बजार मा जर्मनी” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#क्रिसमस बजार christmasingermany europetravel holidaymarkets longtrainjourneys
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप